Maxay DF Soomaaliya ka tiri maxaabiistii dhawaan ka baxsatay Xabsiga dhexe ee Xamar? | HalQaran.com
Maxay DF Soomaaliya ka tiri maxaabiistii dhawaan ka baxsatay Xabsiga dhexe ee Xamar?
Muqdisho (Halqaran.com) – Tan iyo markii ay dhawaan saddex nin oo Maxaabiis ah ay ka baxsadeen Xabsiga dhexe ee Xamar, ayaa arrintaasi waxaa loo xil saaray Guddi Baaritaan ku soo sameeya kiiskaasi.
Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federalka Soomaaliya, ayaa kulan gaar ah la qaatay Guddiga loo xil saaray dabagalka sida ay ku baxsadeen Maxaabiistii ka baxsatay Xabsiga dhexe.
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa u sheegay xubnaha Guddigaasi arrintaasi inay tahay mid halis ah, islamarkaana la doonaayo inay sameeyaan Baaritaan sax ah oo ku aadan qaabka Maxaabiistaasi u baxsadeen.
Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay ciddii arrintaasi fududeysay in sharciga lala tiigsan doono, maadaama ay galeen kiis wayn oo ku aadan baxsad maxaabiis.
Saddexda nin ee Xabsiga ka baxsaday ayaa la sheegay inay ahaayeen Al-Shabaab, waxaana la tilmaamay mid ka mid raggii baxsaday in dib loo soo qabtay.
Xabsiga dhexe ee Xamar oo ah goob ammaankeeda si wayn loo illaaliyo ayeysan suuragal aheyn in maxbuus uu ka baxsado gudaha Xabsiga, haddii aanan loo fududeyn maxbuuskaasi.
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay maxaabiistii ka baxsatay xabsiga dhexe ee Xamar